I-Visa yaseNdiya yabemi baseFrance | Izidingo ze-eVisa zivela eFrance
I-Visa yaseIndiya kubemi baseFrance
Iimfuno ze-eVisa zivela eFrance
India eVisa evela eFrance
Abemi baseFrance banakho Faka isicelo se-eVisa India
IFransi yayililungu lokwazisa lenkqubo ye-India eVisa
Abemi baseFrance bakonwabela ukungena ngokukhawuleza besebenzisa inkqubo ye-India eVisa
Abemi baseFrance bangafaka isicelo se-India eVisa kwi-Intanethi
IVisa yaseIndiya iyafumaneka kubemi baseFrance / abanini yepasipoti ngombane ifomu yokufaka isicelo ukusukela ngo-2014 ukusukela kwi URhulumente waseIndiya. Le visa eya eIndiya ivumela abahambi abavela eFrance nase kwamanye amazwe Ukutyelela i-India ukuhlala ixesha elifutshane. Oku kuhlala ixesha elifutshane kuhleli phakathi kwe-30, 90 kunye ne-180 yeentsuku kutyelelo ngalunye kuxhomekeke kwinjongo yotyelelo. Zintlanu iindidi eziphambili ze-Visa yaseIndiya (India eVisa) efumanekayo kubemi baseFrance. Iindidi ezikhoyo kubemi baseFrance ukuba batyelele eIndiya phantsi komgaqo we-elektroniki i-India Visa okanye i-eVisa India yimigaqo yezoKhenketho, ukuNdwendwela amaShishini okanye uKhenketho lwezoNyango (zombini njengesigulana okanye njengomlindi / umongikazi kwisigulana) ukutyelela i-India.
Abemi baseFransi abatyelele eIndiya ukulungiselela ukuzonwabisa / ukubona indawo / ukudibana kwabahlobo / izihlobo / inkqubo yexesha elifutshane ye-yoga / izifundo zethutyana elifutshane elingaphantsi kweenyanga ezi-6 ngexesha lokufaka isicelo bangazenza iVisa ye-elektroniki yaseIndiya eyenzelwe ukhenketho eyaziwa ngokuba yi-eTourist Visa nokuba yeyinyanga enye. (ukungena kabini), unyaka o-1 okanye iminyaka emi-1 yokuqinisekisa (amangenelo amaninzi eIndiya phantsi kwexesha ezimbini zevisa).
Abemi baseFrance bangafaka isicelo seVisa yaseIndiya ye-elektroniki (eIndia eVisa) ekwi-intanethi kule webhusayithi kwaye banokufumana i-eVisa eya e-India nge-imeyile. Inkqubo yenziwe lula kakhulu kubemi baseFrance. Into efunekayo kukuba ube ne-imeyile ye-imeyile, ikhadi letyala / leDefault kwelinye lezemali ezili-133 okanye Paypal. I-Visa yaseIndiya ye-elektroniki (i-India eVisa) luxwebhu olusemthethweni oluvumela ukungena nokuhamba ngaphakathi eIndiya.
Abemi baseFrance bayakufumana i-eVisa yabo nge-imeyile, emva kokuba beyigqibile ifom yesicelo ekwi-intanethi ngolwazi olufunekayo kunye nokuba intlawulo yekhadi letyala kwi-Intanethi iqinisekisiwe.
Abemi baseFrance baya kuthunyelwa kwikhonkco kwidilesi ye-imeyile yayo nayiphi na amaxwebhu afunekayo ukuxhasa usetyenziso lwazo njengefoto yobuso okanye iphepha ledatha yepasi, ezi zinokukhuphelwa kule webhusayithi okanye zithunyelwe nge-imeyile kwidilesi ye-imeyile yeNkxaso yoMthengi.
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabemi baseFransi ukufaka isicelo seVisa ye-Indiya ye-elektroniki (India eVisa)
Kuthatha ixesha elingakanani kubemi baseFrance ukuzalisa ifomu kwi-intanethi
Abemi baseFransi bangalindela kwangoko kangakanani ukufumana i-Visa yase-Indiya ye-elektroniki (eVisa India)
Ngawaphi amazibuko anokufika abemi baseFransi kwi-Indiya yeVisa ye-elektroniki (eVisa India)
Yintoni ekufuneka yenziwe ngabemi base France emva kokufumana kwi-Visa ye-elektroniki e-India nge-imeyile (eVisa India)
Ijongeka njani i-Visa yaseIndiya kubemi baseFrance?
Abemi baseFrance kufuneka benze nini isicelo seVisa ukuya eIndiya?
Ngaba abemi baseFrance bayayidinga iVisa yaseIndiya (eVisa India) ukuba iza ngenqanawa yokuhamba ngenqanawa?
Izinto ezili-11 zokwenza kunye neendawo ezinomdla kubemi baseFrance
UFatehpur Sikri, Agra
IGreat Stupa, iSanchi
Iitempile eziPhambili zeChola, iThanjavur
IAgra Fort, e-Uttar Pradesh
IYunivesithi yaseNalanda, iBihar Sharif
ICooch Behar Palace, iCooch Behar
IBelur Math, iBelur
Ingcwaba lika-Akbar, uAgra
Ipaki yeSizwe yeSundarbans, South 24 Parganas
Itempile yaseRamadanwamasy, eRameswaram
Ulwandle iMarina, eChennai
Indumasi yaseFrance eNew Delhi